Isaziso sezomthetho kunye neemeko zokusetyenziswa 🥇 I-Emulator.online ▷ 🥇
Uxwebhu oluhlolwe ku-15 / 05 / 2020
Idatha yakho kunye nemfihlo yakho zibaluleke kakhulu kule webhusayithi kwaye kungoko ndincoma ukuba uyifunde yemfihlo.
Igama lenkampani ngu: Jorge Bardales
ICIF / NIF 75164656B
• Iofisi ebhalisiweyo ise-C / Tórtola n-7 18014 (eGranada)
Xa usebenzisa i-emulator.online iwebhusayithi, uMsebenzisi uyavuma ukuba angaziphathi ngendlela enokuthi yonakalise umfanekiso, umdla kunye namalungelo e-emulator.online okanye umntu wesithathu okanye onokonakalisa, ukukhubaza okanye ukulayisha ngaphezulu iwebhusayithi ye-emulator. kwi-intanethi okanye eya kuthintela, nangayiphi na indlela, ukusetyenziswa kwesiqhelo kwewebhu.
i-emulator.online yamkela amanyathelo okhuseleko afanelekileyo okufumanisa ubukho beentsholongwane. Nangona kunjalo, uMsebenzisi kufuneka aqonde ukuba amanyathelo okhuseleko kwiinkqubo zekhompyuter kwi-Intanethi awathembekanga ngokupheleleyo kwaye, ke, i-emulator.online ayinakuqinisekisa ukungabikho kweentsholongwane okanye ezinye izinto ezinokubangela utshintsho kwiinkqubo zekhompyuter. (Isoftware kunye nezixhobo) zoMsebenzisi okanye kumaxwebhu e-elektroniki kunye neefayile eziqulethwe apho.
Gcina, upapashe kunye / okanye udlulise idatha, iitekisi, imifanekiso, iifayili, amakhonkco, isoftware okanye enye into engathandekiyo ngokwemiqathango esemthethweni esebenzayo, okanye ngokokuqikelela kwe-emulator. , amanyala, ubuhlanga, intiyo yabemi okanye enye into ephikisayo okanye engekho semthethweni okanye enokubangela ukwenzakala kwalo naluphi na uhlobo, ngakumbi iphonografi.
Njengomsebenzisi, uyaxelelwa ukuba ukufikelela kule webhusayithi akuthethi, nangayiphi na indlela, ukuqala kobudlelwane bezorhwebo noJorge Bardales ngale ndlela, umsebenzisi uyavuma ukusebenzisa iwebhusayithi, iinkonzo zayo kunye nemixholo ngaphandle kokuphula umthetho. Okwangoku, ukholo olulungileyo kunye nocwangco kuluntu. Ukusetyenziswa kwewebhusayithi ngeenjongo ezingekho mthethweni okanye eziyingozi, okanye nangayiphi na indlela, kunokubangela umonakalo okanye kuthintele ukusebenza kwesiqhelo kwewebhusayithi akuvumelekanga.
Ukuveliswa kwakhona, ukuhanjiswa okanye ukuguqulwa kwayo, ngokupheleleyo okanye kwinxalenye, ngaphandle kokuba kugunyazisiwe ngabanini bayo abasemthethweni;
UJorge Bardales uqinisekisa ukugcinwa kwemfihlo kwedatha yobuqu ebonelelwe ngabasebenzisi kunye nonyango lwabo ngokungqinelana nomthetho okhoyo ngoku wokukhuselwa kwedatha yobuqu, ukwamkela amanqanaba okhuseleko afunekayo ngokomthetho okhuseleko lwedatha yobuqu.
UJorge Bardales uthembisa ukusebenzisa idatha ebandakanyiwe kwifayile ethi "Abasebenzisi beWEBHU KUNYE NABABHALISAYO", ukuhlonipha ukugcinwa kwemfihlo kwabo nokuyisebenzisa ngokungqinelana nenjongo yoko, kunye nokuthobela uxanduva lokubasindisa nokulungelelanisa onke amanyathelo ukuthintela uguquko, ilahleko, unyango okanye ukufikelela okungagunyaziswanga, ngokungqinelana nemigaqo yoMthetho wasebukhosini ka-1720/2007 we-21 kaDisemba, ovuma iMigaqo yophuhliso loMthetho we-Organic 15/1999 ka-Disemba 13, Ukukhuselwa kweenkcukacha zoBuntu.
Le webhsayithi isebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokubamba ulwazi ezichazwe kwi yemfihlo kwaye apho ukusetyenziswa kunye neenjongo kuxelwa ngokweenkcukacha. Le webhusayithi ihlala ifuna imvume yabasebenzisi yokuqhubekeka idatha yabo yobuqu ngeenjongo ezichaziweyo.
Umsebenzisi unokusebenzisa, ngokubhekisele kwidatha eqokelelweyo, amalungelo amkelwe kwi-Organic Law 15/1999, yokufikelela, yokulungisa okanye ukucima idatha kunye nenkcaso. Ukusebenzisa la malungelo, umsebenzisi kufuneka enze isicelo esibhaliweyo nesisayiniweyo abanokuthi basithumele, kunye nefotokopi yesazisi sabo okanye uxwebhu lokuchonga olufanayo, kwidilesi yeposi kaJorge Bardales (Oko kukuthi, C / Tórtola n-7 18014 (IGranada)) okanye nge-imeyile, iqhotyoshelwe ikopi ye-ID kwi: info (e) emulador.online. Ngaphambi kweentsuku ezili-10, isicelo siya kuphendulwa ukuqinisekisa ukuphunyezwa kwelungelo ocele ukulisebenzisa.
UJorge Bardales wazisa ukuba kukho iifom zezikhalazo ezikhoyo kubasebenzisi nakubathengi.
Umsebenzisi unokwenza amabango ngokucela ifom yebango okanye ngokuthumela i-imeyile ku-info (e) emulador.online ebonisa igama lakho nefani, inkonzo okanye imveliso ethengiweyo achaze nezizathu zebango lakho.
Ungalihambisa ibango lakho ngeposi yeposi ku: Jorge Bardales, C / Tórtola n-7 18014 (eGranada) usebenzisa, ukuba unqwenela, le fomu yebango ilandelayo:
Attn: UJorge Bardales
C / Tortola n-7 18014 (eGranada)
I-imeyile: ulwazi (kwi) emulator. Online
Ngale miQathango Jikelele, akukho malungelo obunini okanye obunini bepropathi obunikiweyo kwi-emulator yewebhu. ukuphinda usebenzise, ​​ukuhambisa phambili, okanye ukusetyenziswa kwayo nayiphi na imeko, ngayo nayiphi na indlela, okanye nayiphi na, ngaphandle kwaxa kuvunyelwe ngokusemthethweni okanye kugunyaziswe ngumnini wamalungelo ahambelanayo.
Kwimeko apho umsebenzisi okanye umntu wesithathu ethathela ingqalelo ukuba kukho ukunyhashwa kwamalungelo abo asemthethweni epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ngenxa yokwaziswa komxholo othile kwiWebhu, kufuneka bazise uJorge Bardales wale meko ichazayo:
UJorge Bardales uyala naluphi na uxanduva ngokubhekisele kulwazi olufunyenwe ngaphandle kwale webhusayithi, kuba umsebenzi wamakhonkco abonakalayo kukwazisa uMsebenzisi malunga nobukho beminye imithombo yolwazi kwisihloko esithile. UJorge Bardales uxolelwe kulo lonke uxanduva lokusebenza ngokuchanekileyo kwezi makhonkco, isiphumo esifunyenwe ngeziqhagamshelo ezichaziweyo, ubunyani kunye nokuba semthethweni komxholo okanye ulwazi olunokufikelelwa, kunye nomonakalo osenokuvela kuMsebenzisi. ngenxa yolwazi olufunyenwe kwiwebhusayithi edibeneyo.
UJorge Bardales akanikezeli nasiphi na isiqinisekiso kwaye akanaxanduva, nangayiphi na imeko, ngomonakalo walo naluphi na uhlobo olunokubangelwa:
Ngokubanzi, ubudlelwane phakathi kwe-emulador.online kunye naBasebenzisi beenkonzo zayo ze-telematic, ezikhoyo kule webhusayithi, zixhomekeke kumthetho waseSpain nakulawulo nakwiiNkundla zaseGranada.
Kwimeko apho nawuphi na uMsebenzisi enayo nayiphi na imibuzo malunga nesi saziso somthetho okanye naluphi na uluvo kwi-web emulator.online, banokuya kulwazi (apha) emulador.online.
i-emulator.online inelungelo lokuguqula, nangaliphi na ixesha kwaye ngaphandle kwesaziso sangaphambili, umboniso kunye noqwalaselo lwe-emulator ye-intanethi, njengesi saziso somthetho.
Umsebenzisi uyavuma ukuba angaziphathi ngendlela enokuthi yonakalise umfanekiso, umdla kunye namalungelo e-emulator okanye kwi-intanethi okanye umntu wesithathu okanye onokonakalisa, ukukhubaza okanye ukulayisha ngaphezulu i-emulator ye-intanethi okanye eya kuthintela, nangayiphi na indlela, ukusetyenziswa okuqhelekileyo kwewebhu.